Ahoana no fanaovana tranokala ho an'ny fikojakojana sy ny fanompoana?
Miaraka amin'i Wix, maherin'ny 131 tapitrisa ny olona eran-tany no mitondra ny asany amin'ny Internet. Wix dia manolotra mpampiasa ny fahafahana mamorona tranokala SEO amin'ny fomba haingana sy mahasoa indrindra. Afaka manome fiarovana na serivisy ho an'ny sehatra rehetra ianao ary mila tranonkala iray. Ahoana no fomba ahazoako tranonkala ao amin'ny Google izay hita ao amin'ny pejy voalohany? Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ity olana ity. Fantaro ny fomba fananganana tranonkala iray ho an'ny fikojakojana na serivisy. Azafady noteo fa tsy mila mahafantatra ny coding ianao mba hamoronana ny tranonkalanao amin'ny Wix, azonao atao ny mametraka ny tranonkalanao rehefa mamorona kaonty media sosialy amin'ny fomba fisintonana sy ny famafana. Azonao atao ny mampiditra mora foana ny kaonty media sosialy ao amin'ny tranonkalanao. Karazan-tsary momba ny sary sy video. Ataovy ny tranonkalanao manokana.
Ireto misy sehatra sasantsasany ahafahanao mamorona tranokala ho an'ny fikojakojana na serivisy amin'ny Wix;
Tranonkala ho an'ny orinasa mpanorina
Tranonkala ho an'ny orinasa mpamono glasy
Website for work flooring
Tranonkala ho an'ny fiara fiara
Tranonkala ho an'ny orinasan-tserasera
Website for improvement home
Tranonkala ho an'ny repairman
Tranonkala ho an'ny orinasam-pifandraisana goavana
Tranonkala ho an'ny fanasana lamba sy fanadiovana
Tranonkala ho an'ny fanadiovana maina
Trano fandraisam-bahiny tranokala fanokanana
Tranonkala momba ny fanasan-damba fiara
Afaka mamorona vohikala ho an'ny fikojakojana sy ny fanompoana hafa ankoatra ireo sekta ireo ianao. Ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny mamorona tranokala miaraka amin'ny Wix ADI (Wix artificial design intelligence) na hanova ireo Tempoly vonona an'i Wix. Wix dia manolotra anao ny fahafahana mamorona tranokala misy safidy 2 ho an'ireo mpampiasa tianao.
Andeha isika izao hianatra ity dingana ity.
1. Wix ADI (Wix artificial design intelligence) mba hamoronana tranonkala fifaneraserana sy serivisy.
Aorian'ny sekoly Wix 30 segondra, rehefa misafidy Wix ADI amin'ny fametrahana tranonkala ianao, ny rafitra Wix dia hangataka anao hizara vaovao. Tsy maintsy manoratra ity vaovao ity ianao raha ilaina. Avy eo, afaka mamorona tranonkala ianao amin'ny fanindriana ny fanalahidy tokana. Azonao atao ny manjary mpihaino Wix amin'ny alàlanao tsindrio eto.
Ohatra fametrahana tranokala ohatra;
Eny, namorona ny tranokalanay miaraka amin'ny Wix ADI izahay.
2. Mamorona tranokala maoderina amin'ny editor Wix
Amin'ny Wix Editor, azonao atao ny mandika tranonkala vita tranokala noforonin'ny ekipa mpanamboatra tranonkala Wix amin'ny fiteny tariby misy lanjany mandritra ny minitra vitsy. Azonao atao ny mijery ny pejy ao amin'ny Google amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tranokalanao SEO ao anaty tranonkala.
Ohatra, fananganana tranokala momba ny fitrandrahana;
Tena mora ny manangana tranokala fikojakojana sy serivisy miaraka amin'i Wix.
Raha tianao ny tranokalanao sy ny orinasanao amin'ny pejy voalohany ao amin'ny Google, dia manoro hevitra mafy izahay fa hamorona orinasa orinasa Google. Amin'izay dia hiseho eo amin'ny pejy voalohany amin'ny fikarohana Google ao amin'ny tranokalanao ny tranonkalanao. Azonao atao tsindriana eto ny manoratra ny raharahako amin'ny Google.
Ny fanaovana ny sehatra SEO ho an'ny tranonkala noforoninao amin'ny Wix dia tsotra. Amin'ny Wixard Wix Wix, taorian'ny namoronana ny tranonkala, dia afaka mahita ny fahadisoanao ianao amin'ny fanaovana scan kely. Amin'ny dingana farany, afaka mandefa ny tranokalanao amin'ny Google ianao.
Azonao atao ny mampiasa ny safidy 2 taona, 1 taona na isam-bolana mba hananana tranonkala Wix. Rehefa avy mamorona tranokala ianao dia mila manana sehatra iray. Raha manao fandoavam-bola isan-taona ianao, ny rafitra Wix dia hanome anao 1 taona amin'ny sehatra malalaka. Ankoatra izany, ny valisoa Google Adwords mendrika $ 100 dia fanomezana iray hafa ho anao. Mariho fa rehefa mividy Wic premium ny fonosana ianao, dia manan-jo haharitra 14 andro. Ao anatin'ny 14 andro dia afaka manaisotra ny volanao amin'ny fotoana rehetra ianao.
Raha te hiditra amin'ny Wix anatin'ny 30 segondra ianao dia tsindrio eto. Na azonao tsindrio ny sary.